ခွဲခွာနေရတဲ့အချိန်မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမကိုလွမ်းလို့ တခြားသူနဲ့ ကြိုက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ??? ????? ??????? ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုး – Maythadin
ခွဲခွာနေရတဲ့အချိန်မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမကိုလွမ်းလို့ တခြားသူနဲ့ ကြိုက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ??? ????? ??????? ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုး
ခင်ရတနာစိုးကတော့ လက်ရှိ ??? ????? ??????? ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိပြီး ???? ဝင်နေရတဲ့အတွက် ခင်ပွန်းသည်တစ်ယောက် မိန်းမကိုလွမ်းလို့တခြားသူနဲ့ကြိုက်သွားမှာစိုးတယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ ခင်ရတနာစိုးကတော့“ခင်ပွန်းကိုက စိတ်ချပါတယ် တစ်လနီးနီးခွဲရမှာဆိုတော့ သူက တခြားမိန်းကလေးတွေ့ရင်တောင်စကားမပြောဘူး ညီမကသာလူတိုင်းနဲ့ခေါ်ပြောတာပေါ့ တစ်ခါတစ်လေမိန်းမကိုလွမ်းတဲ့အခါ တခြားသူတွေနဲ့ ကြိုက်သွားမှာနည်းနည်းတော့
စိုးရိမ်တာပေါ့ ငယ်လည်းငယ်သေးတော့ အဲ့လောက်အကြာကြီးခွဲနိုင်ပါ့မလားပေါ့ စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့” ” အိမ်ထောင်ပြုတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ညီမဆိုးတဲ့စိတ်လေးနည်းနည်းများပျောက်သွားမလားလို့ အစကဆို ညီမ ကလေးလုံးဝမချစ်တတ်ဘူး သူများကလေးလာပြလည်းညီမမကိုင်ဘူး တစ်ဦးတည်းသောသမီးဆိုတော့ ကလေးမချစ်ဘူး လိုက်ဆွဲဆိတ်တာအရမ်းဆိုးတာ သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးတော့ မိခင်စိတ်လေးနည်းနည်းဝင်လာတယ် ဒီအတိုင်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုက
အလိုလိုပေါ့နော် ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ကလေးကိုမဆို မေတ္တာထားနိုင်တယ် မိဘမေတ္တာနားလည်လာတယ် အမေ့ကျေးဇူးလည်းသိတတ်လာတယ် စီးပွားရေးပတ်သတ်ပြီးကိုယ့်ဘာသာရှာသုံးရတာဆိုတော့ နည်းနည်းလေးရုန်းနိုင်တဲ့အနေအထားလေး ရောက်လာတယ်ပေါ့ ” “ရင်သွေးယူဖို့ကတော့ ညီမဒီပြိုင်ပွဲအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲပေါ့ ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်တက်ခဲ့ရင် ညီမအားစိုက်ရမယ် အကယ်၍အောင်မြင်သွားရင်တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နောက်၁နှစ်၂နှစ်လောက်နေရင်
ယူဖြစ်မယ် အကယ်၍မအောင်မြင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ၄နှစ်၅နှစ်လောက်စောင့်ရမယ် အောင်မြင်ပြီးရင်တော့ သားသမီးကိုတော့ကိုယ်နဲ့အတူထားလို့တော့မရဘူးပေါ့ စိတ်ချရတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာထားပြီး ကိုယ်ကအလုပ်လုပ် အဲဒီ့လိုဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် မအောင်မြင်သေးရင် လက်ထဲပိုက်ဆံစုရဦးမှာပေါ့” “အိမ်ထောင်သက်က ၅နှစ်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ ကိုယ်လည်းလိုချင်တာပေါ့နော် ခင်ပွန်းကတော့ တစ်ချို့တားနေရင်ရသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ယူ မယူစေချင်သေးဘူး
ဆိုတာက သူကိုယ်တိုင်လည်း မရုန်းကန်နိုင်သေးဘူး ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကြားတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာ ကလေးယူလိုက်ရင်ပိုဆိုးသွားမယ် နို့စို့အရွယ်က အိမ်ထောင်ကျလူကြီးဖြစ်တဲ့အထိ ကိုယ်လုပ်ပေးရမှာ” “ညီမကိုယ်တိုင်လည်း ငါအိမ်ထောင်ကျသွားတာတောင် ငါ့မိဘဆီကနေ ပိုက်ဆံတောင်းရတာမလွတ်သေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်လေ အဲဒီ့တော့ ပိုက်ဆံမရှိဘဲ သားသမီးတစ်ယောက်မွေးရတာမလွယ်ပါဘူး အိမ်ထောင်ပြုတုန်းက ကလေးအတွေးပေါ့နော်
ညီမကအရမ်းအရိုက်ခံရတာ အဖေကလည်းမရှိဘူး အမေကခေါင်းရင်းအိမ်ခြေရင်းအိမ်တောင်ပေးမလည်ဘူး ထုတ်မချစ်ဘူးပေါ့နော် အမေကတော့ရိုက်တယ် ညီမကလည်းမလွတ်လပ်တော့ကြာလာတော့ဆိုးတယ် ကျောင်းသွားရင်တောင်လက်ရှည်မဝတ်ဘဲမနေရဲဘူး အရှိုးရာတွေ ဒါပေမဲ့အမေက ညီမကိုချစ်တယ်” “ညီမအမျိုးသားနဲ့ကြိုက်တာတောင်မှ ၂နှစ်ကို ၄ခါပဲချိန်းတွေ့ဖူးတယ် သူလည်းအနေအထိုင်တတ်တယ် ကိုယ့်ကိုလက်တောင်မကိုင်ဘူး အဲဒီ့တုန်းကဖြစ်ချင်တော့
ချစ်သူများနေ့မှာတွေ့နေတုန်း အမေလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ နင်ငါနောက်လိုက်မလား အေးလိုက်မယ်ဆိုပြီး လိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ ညီမအထင်တော့ စိတ်ထွက်ပေါက်အရလို့ပဲထင်တယ် ညီမအမျိုးသားလည်း နောင်တရတယ် ယူလိုက်ရလို့မဟူတ်ဘူး အသက်၂၀မှာအိမ်ထောင်ကျကျ ၂၅နှစ်မှာ အိမ်ထောင်ကျကျ သူနဲ့ပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ အလုပ်လုပ်တာအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိတယ် ကိုယ်အိမ်ထောင်ရှိလို့ တစ်ချို့အရာလေးတွေစွန့်လွှတ်လိုက်ရတာရှိတယ်
သူရောကိုယ်ရော နည်းနည်းတော့နောင်တရတာပေါ့ ပညာရေးတွေလည်းဆုံးခန်းမတိုင်ကြဘူးလေ ” “သူကတော့ညီမကိုမိန်းမလိုပိုချစ်တယ်ထင်တယ် ညီမကတော့ အစ်ကိုလိုအဖေလိုပိုချစ်တယ်ထင်တယ် အခုခရီးဝေးကိုလာတယ် ညီမက သူ့ကိုခွဲနိုင်တယ် နေတတ်တယ် သူဆိုရင် ညီမနဲ့ခွဲတော့မနေနိုင်ဘူး သူလွမ်းလိုထမင်းတစ်နပ်ပဲစားတယ်တဲ့ ကိုယ်ကတော့ဒီမှာစားကောင်းတယ် ငါလည်းစားမကောင်းဘူးလိမ်ရတာပေါ့ သတိရတာတော့ရတယ် ညီမကလွတ်လွတ်လပ်လပ်
နေတတ်တဲ့သူဆိုတော့ အမေဆိုလည်း ညီမကိုသတိရတယ် ညီမကလည်းသတိရတယ်ဆိုပေမယ့် ရောက်ရာနေရာမှာ ပျော်အောင်နေတတ်တယ်” “အိမ်ထောင်ပြုရင်တော့ စီးပွားရေးအတည်တကျလေးဖြစ်မှာအိမ်ထောင်ပြုကြပါ ညီမတို့လို နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ လောကဓံမှာကြုံတွေ့ရမှာတွေအများကြီးပါ အဲ့တာတောင်သူနဲ့ညားခါစက ညီမမှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတစ်စိုက်မတ်မတ်ရှိလို့ မဟုတ်ရင်
မလွယ်ဘူး နှစ်ဖက်မိဘပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲရမှာ သူ့မှာလည်းအလုပ်မရှိဘူး ညီမသီချင်းဆိုလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ လင်မယား၂ယောက်နေရတာ သူ့အိမ်က အိမ်ထောင်ကျပြီး၂နှစ်နေမှ စီးပွားရေးထောင်ပေးတာ ညီမသာအလုပ်မရှိရင် ဒီလောက်ပေါင်းဖို့မလွယ်ဘူး ခဏခဏလည်းရန်ဖြစ်တယ် အဲ့တာကြောင့်နှလုံးသားနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ပေါ့ အဲ့တာလေးပြောပြချင်တာပါ” လို့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
ခငျရတနာစိုးကတော့ လကျရှိ ??? ????? ??????? ပွိုငျပှဲမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျလကျြရှိပွီး ???? ဝငျနရေတဲ့အတှကျ ခငျပှနျးသညျတဈယောကျ မိနျးမကိုလှမျးလို့တခွားသူနဲ့ကွိုကျသှားမှာစိုးတယျလို့ ဆိုလာပါတယျ။ ခငျရတနာစိုးကတော့“ခငျပှနျးကိုက စိတျခပြါတယျ တဈလနီးနီးခှဲရမှာဆိုတော့ သူက တခွားမိနျးကလေးတှရေ့ငျတောငျစကားမပွောဘူး ညီမကသာလူတိုငျးနဲ့ချေါပွောတာပေါ့ တဈခါတဈလမေိနျးမကိုလှမျးတဲ့အခါ တခွားသူတှနေဲ့ ကွိုကျသှားမှာနညျးနညျးတော့
စိုးရိမျတာပေါ့ ငယျလညျးငယျသေးတော့ အဲ့လောကျအကွာကွီးခှဲနိုငျပါ့မလားပေါ့ စောငျ့ကွညျ့ရတာပေါ့” ” အိမျထောငျပွုတာနဲ့ပတျသတျပွီးတော့ ညီမဆိုးတဲ့စိတျလေးနညျးနညျးမြားပြောကျသှားမလားလို့ အစကဆို ညီမ ကလေးလုံးဝမခဈြတတျဘူး သူမြားကလေးလာပွလညျးညီမမကိုငျဘူး တဈဦးတညျးသောသမီးဆိုတော့ ကလေးမခဈြဘူး လိုကျဆှဲဆိတျတာအရမျးဆိုးတာ သူနဲ့အိမျထောငျကသြှားပွီးတော့ မိခငျစိတျလေးနညျးနညျးဝငျလာတယျ ဒီအတိုငျးသူ့ရဲ့စိတျကိုက
အလိုလိုပေါ့နျော ဘယျလောကျဆိုးတဲ့ကလေးကိုမဆို မတ်ေတာထားနိုငျတယျ မိဘမတ်ေတာနားလညျလာတယျ အမကြေ့ေးဇူးလညျးသိတတျလာတယျ စီးပှားရေးပတျသတျပွီးကိုယျ့ဘာသာရှာသုံးရတာဆိုတော့ နညျးနညျးလေးရုနျးနိုငျတဲ့အနအေထားလေး ရောကျလာတယျပေါ့ ” “ရငျသှေးယူဖို့ကတော့ ညီမဒီပွိုငျပှဲအပျေါမူတညျပွီးတော့ပဲပေါ့ ပွိုငျပှဲမှာအဆငျ့တကျခဲ့ရငျ ညီမအားစိုကျရမယျ အကယျ၍အောငျမွငျသှားရငျတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသတျပွီး နောကျ၁နှဈ၂နှဈလောကျနရေငျ
ယူဖွဈမယျ အကယျ၍မအောငျမွငျသေးဘူးဆိုရငျတော့ ၄နှဈ၅နှဈလောကျစောငျ့ရမယျ အောငျမွငျပွီးရငျတော့ သားသမီးကိုတော့ကိုယျနဲ့အတူထားလို့တော့မရဘူးပေါ့ စိတျခရြတဲ့တဈယောကျယောကျဆီမှာထားပွီး ကိုယျကအလုပျလုပျ အဲဒီ့လိုဆိုရငျတော့ အဆငျပွတေယျပေါ့နျော မအောငျမွငျသေးရငျ လကျထဲပိုကျဆံစုရဦးမှာပေါ့” “အိမျထောငျသကျက ၅နှဈထဲရောကျပွီဆိုတော့ ကိုယျလညျးလိုခငျြတာပေါ့နျော ခငျပှနျးကတော့ တဈခြို့တားနရေငျရသှားတာမြိုးဆိုရငျတော့ယူ မယူစခေငျြသေးဘူး
ဆိုတာက သူကိုယျတိုငျလညျး မရုနျးကနျနိုငျသေးဘူး ကိုဗဈဖွဈတဲ့ကွားတဲ့လငျမယားနှဈယောကျရုနျးကနျနရေတဲ့အခြိနျမှာ ကလေးယူလိုကျရငျပိုဆိုးသှားမယျ နို့စို့အရှယျက အိမျထောငျကလြူကွီးဖွဈတဲ့အထိ ကိုယျလုပျပေးရမှာ” “ညီမကိုယျတိုငျလညျး ငါအိမျထောငျကသြှားတာတောငျ ငါ့မိဘဆီကနေ ပိုကျဆံတောငျးရတာမလှတျသေးဘူးဆိုတဲ့စိတျရှိတယျလေ အဲဒီ့တော့ ပိုကျဆံမရှိဘဲ သားသမီးတဈယောကျမှေးရတာမလှယျပါဘူး အိမျထောငျပွုတုနျးက ကလေးအတှေးပေါ့နျော
ညီမကအရမျးအရိုကျခံရတာ အဖကေလညျးမရှိဘူး အမကေခေါငျးရငျးအိမျခွရေငျးအိမျတောငျပေးမလညျဘူး ထုတျမခဈြဘူးပေါ့နျော အမကေတော့ရိုကျတယျ ညီမကလညျးမလှတျလပျတော့ကွာလာတော့ဆိုးတယျ ကြောငျးသှားရငျတောငျလကျရှညျမဝတျဘဲမနရေဲဘူး အရှိုးရာတှေ ဒါပမေဲ့အမကေ ညီမကိုခဈြတယျ” “ညီမအမြိုးသားနဲ့ကွိုကျတာတောငျမှ ၂နှဈကို ၄ခါပဲခြိနျးတှဖေူ့းတယျ သူလညျးအနအေထိုငျတတျတယျ ကိုယျ့ကိုလကျတောငျမကိုငျဘူး အဲဒီ့တုနျးကဖွဈခငျြတော့
ခဈြသူမြားနမှေ့ာတှနေ့တေုနျး အမလေိုကျလာတယျဆိုတော့ နငျငါနောကျလိုကျမလား အေးလိုကျမယျဆိုပွီး လိုကျဖွဈသှားတာပေါ့ ညီမအထငျတော့ စိတျထှကျပေါကျအရလို့ပဲထငျတယျ ညီမအမြိုးသားလညျး နောငျတရတယျ ယူလိုကျရလို့မဟူတျဘူး အသကျ၂၀မှာအိမျထောငျကကြ ၂၅နှဈမှာ အိမျထောငျကကြ သူနဲ့ပဲ ငယျငယျရှယျရှယျဒီလိုဖွဈသှားတော့ အလုပျလုပျတာအဆငျမပွတောလေးတှရှေိတယျ ကိုယျအိမျထောငျရှိလို့ တဈခြို့အရာလေးတှစှေနျ့လှတျလိုကျရတာရှိတယျ
သူရောကိုယျရော နညျးနညျးတော့နောငျတရတာပေါ့ ပညာရေးတှလေညျးဆုံးခနျးမတိုငျကွဘူးလေ ” “သူကတော့ညီမကိုမိနျးမလိုပိုခဈြတယျထငျတယျ ညီမကတော့ အဈကိုလိုအဖလေိုပိုခဈြတယျထငျတယျ အခုခရီးဝေးကိုလာတယျ ညီမက သူ့ကိုခှဲနိုငျတယျ နတေတျတယျ သူဆိုရငျ ညီမနဲ့ခှဲတော့မနနေိုငျဘူး သူလှမျးလိုထမငျးတဈနပျပဲစားတယျတဲ့ ကိုယျကတော့ဒီမှာစားကောငျးတယျ ငါလညျးစားမကောငျးဘူးလိမျရတာပေါ့ သတိရတာတော့ရတယျ ညီမကလှတျလှတျလပျလပျ
နတေတျတဲ့သူဆိုတော့ အမဆေိုလညျး ညီမကိုသတိရတယျ ညီမကလညျးသတိရတယျဆိုပမေယျ့ ရောကျရာနရောမှာ ပြျောအောငျနတေတျတယျ” “အိမျထောငျပွုရငျတော့ စီးပှားရေးအတညျတကလြေးဖွဈမှာအိမျထောငျပွုကွပါ ညီမတို့လို နှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖွတျလိုကျမယျဆိုရငျတော့ လောကဓံမှာကွုံတှရေ့မှာတှအေမြားကွီးပါ အဲ့တာတောငျသူနဲ့ညားခါစက ညီမမှာ အနုပညာလုပျငနျးတဈစိုကျမတျမတျရှိလို့ မဟုတျရငျ
မလှယျဘူး နှဈဖကျမိဘပိုပွီးစိတျဆငျးရဲရမှာ သူ့မှာလညျးအလုပျမရှိဘူး ညီမသီခငျြးဆိုလို့ရတဲ့ပိုကျဆံနဲ့ပဲ လငျမယား၂ယောကျနရေတာ သူ့အိမျက အိမျထောငျကပြွီး၂နှဈနမှေ စီးပှားရေးထောငျပေးတာ ညီမသာအလုပျမရှိရငျ ဒီလောကျပေါငျးဖို့မလှယျဘူး ခဏခဏလညျးရနျဖွဈတယျ အဲ့တာကွောငျ့နှလုံးသားနဲ့မဆုံးဖွတျပါနဲ့ပေါ့ အဲ့တာလေးပွောပွခငျြတာပါ” လို့ အငျတာဗြူးမှာ ဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ။
သူမနဲ့အဖြစ်ချင်းတူပြီး အိမ်ပေါင်ထားရတဲ့ ကလေးအမေ လေးဘက်နာရောဂါသည်ကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီ